ရောဂါပျောက်ကင်းသွားသည့်တိုင်ခန္ခာကိုယ် အတွင်းမှ ပြန်လည်ထကြွနိုင်ခြေရှိတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရစ် - DailyInfo - Myanmar
ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ သာမာန်အဖျားရောဂါ ကူးစက်ခံရသူဟာ ဖျားနာပြီးနောက် ရောဂါဖြစ်သူဟာ ဗိုင်းရပ်စ် ကို ခုခံစွမ်းအားကို ရရှိစေပါတယ်။
ထို့အတူ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကမ္ဘာတစ်လွားသို့ အစပိုင်း ကူးစက်ပြန့်နံ့နေချိန်မှာတော့ ကူးစက်သူအများစုမှာ ပြန်ကောင်းသွားပီး ပိုးမတွေ့ရတော့ပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာတော့ အသွင်ပြောင်းလဲပီး မျိုးရိုးဗိဇ ပြောင်းလဲ လာတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ကူးစက်ခံရသူအချို့ဟာ‌ ရောဂါကူးစက်မူကျန်းမာရေး အခြေအနေ သက်သာလာပီး “Zero Positive” အခြအနေမှာတောင် ပိုးပြန်တွေ့တဲ့ အခြေအနေကိုကြုံတွေ့နေရကြောင်း သိရသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကြီး Media NHK ရဲ့ အဆို အရ အသက် ၇၀ အရွယ်ရှိဂျပန် အမျိုးသား တစ်ဦးဟာ ဖေဖ၀ါရီ လဆန်းပိုင်းလောက်က ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရကြောင်းသိရှိပီးနောက် တိုကျိုရှိဆေးရုံ တစ်ခုမှာ သီးသန့်ခွဲခြားထားခဲ့တာပါ။ ရက်သတ္တပတ် အနည်းကြာပီးနောက်မှာတော့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ သက်သာလာတဲ့အတွက် ဆေးရုံမှ ဆင်းကာ
နေ့စဉ် လူမူဘ၀မှာ ပြန်လည်လူပ်ရှားနေပီး အများသုံး ကား၊ရထားတွေတောင် စီးနေခဲ့ပါပီ။
ဒါပေမယ့် ရက်ပိုင်း အနည်းငယ်လောက်အကြာမှာ သူနေမကောင်းဖြစ်ပီး ဆေးရုံကို‌နောက်တစ်ခေါက် ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပါတယ်။
သူ ဆေးရုံကို နောက်တစ်ခေါက် ပြန်လာခဲ့တော့ သူ့ ဆရာဝန်တွေ အံ့သြသွာခဲ့ပါတယ်။
နောက်တော့ သူ့မှာ ဗိုင်းရပ်စ် နောက်တစ်ခေါက် ထပ်ရှိနေပြန်ပြီဆိုတာ သိလိုက်ရပါတယ်။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ထပ်မံ ကူးစက်ခြင်း ခံရတာလား?
တစ်ခါကူးစက်မူခံရပီးနောက်ပိုင်းမှာ ဇီးရိုးပေါ့စတစ် ဖြစ်သွားသည့်တိုင်အောင်ကိုယ်ထဲက ခုခံအားစနစ်နဲ့ မတွေ့ခဲ့တဲ့ ကူးစက်နိုင်စေတဲ့ ပစ္စည်းတချို့ တခြားကိုယ်အင်္ဂါတွေထဲက တစ်ရှူးတွေထဲမှာ ဆက်ရှိနေနိုင်ပါသေးတယ်။
ကဲ! အာ့တာကြောင့် ရောဂါ ကူးစက်မခံရသူတွေရော၊ရောဂါ ပျောက်ကင်းသက်သာသွားသူများရော တတ်နိုင်သမျှ Stay Home နေခြင်း၊အစိုးရက ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ ညွန်ကြားချက်များကို “တိတိကျကျ” လိုက်နာခြင်း၊ ကိုယ်ခံအားကောင်းမွန်အောင် လုပ်ခြင်း တို့ကို အလေးနက်ထားလုပ်ဆောင်သင့်ကြောင်း အကြံပြုရင်း DailyInfo Myanmar မှ ကျန်းမာပါစေ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျား။
Like & Share for more health article. Thanks for reading.
မတော်တဆကွာရန်တင်းစင်တာမှာ “Q”၀င် ရရင်ဘာတွေ သိထား/လုပ်ထားသင့်သလဲ